Sodàna: Tonga ny Shinoa Ary Tsy Azo Ny Fitantànana Ny Firaisambe Afrikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2017 12:14 GMT
Ny zavatra asongadin'ity tatitra ity dia ny tsy fahazoan'i Sodàna ny Fitantànana ny Firaisambe Afrikana fa lasan'i Ghana, sy ireo eritreritra sasany momba ireo tombontsoan'i Shina any Afrika. Mahazo aina i Black Kush fa tsy azon'ny filohan'i Sodàna Omar Hassan al-Bashir ny tolotra ho lasa filohan'ny Firaisambe Afrikana:
Araka izany, niteny ireo filoha Afrikana. Tamin'ny fomba mahazatra famahàna ireo olana, dia lasan'i Ghana ny toeran'ny fitantànana ny Firaisambe Afrikana.
Afaka misento ianareo, fa ahoana ny momba ny fifanarahana ho an'ny taona ho avy ? Tsy mbola misy miresaka izany izao.
Tahaka izany ihany koa ny The Sudanese Thinker. Samy nizara ny eritreriny momba an'i Shina ihany koa ry zareo. Nitoraka bilaogy mitondra ny lohateny hoe “Tonga ny Shinoa ! “ i Black Kush :
Efa mahazatra ny hoe miteraka tahotra manerana izao tontolo izao ity hiaka ity, saingy efa tara loatra izao. Efa eto ry zareo, izany no zava-misy aty Sodàna .
Inona no tadiavin'ny Shinoa amin'i Afrika, ny lazainy avy aty Sodàna ? Tsy misy ny tsiambaratelo fa efa hatry ny ela ny Shinoa no nampiasa vola be taty Sodàna. Rehefa nialàn'ny firenena tandrefana i Sodàna, dia tonga ny Shinoa hameno ny banga. Iza no hanameloka an'i Sodàna ? Feno azy ireo ny tanàna, manamboatra làlana, tohodrano sy tetezana aty Sodàna, maka solika sy izay rehetra anao.
I Shina no hany firenena afaka manindry an'i Sodàna raha ny momba an'i Darfur noho ny amin'ny fampiasàmbolany. Ahoana hoy i Hu ? Atsaharo ny fifamonoana sa hiverina izahay ? Tsy nisy nanam-po an'izany. Raha zon'olombelona izany, dia hatry ny ela i Shina izy tenany no efa tsy nifanaraka tamin'ny tandrefana.
Tonga soa aty Sodàna i Hu. Raha toa ny fahatongavany ka afaka manao zavatra momba an'i Darfur, ny tsara indrindra, fa tsy milaza ny antony tokony hitsidihany voalohany an'i Sodàna no ataony.
Izao no ambaran'ny The Sudanese Thinker :
Maro amin'ny Sodane no faly noho ny fanànan'i Shina sy i Sodàna fifamatorana akaiky tahaka izany. Ankasitrahan-dry zareo ny hevitra hoe nisaraka tamin'i Amerika ary fenoin'ny hery matanjaka vaovao Shinoa ny banga. Tsy izany. Raha ny marina, mampanahy ahy izany hevitra izany. Aleoko kokoa mifidy an'i Amerika ho hery tokana matanjaka toy izay i Shina. Matahotra izay tsy fantatro aho ary tsy fantatro tsara ny fikasàn'i Shina ( angamba tokony hifandray matetika aminà mpitoraka bilaogy shinoa aho ). Fa na izany aza, fantatro fa tsara kokoa i Amerika sy ny Tandrefana. Noho izany tsy dia miahiahy ratsy amin-dry zareo aho. Ambonin'izany, tsy misy demokrasia any Shina. Firenena tsy manana ny tena fahalalahana izy no sady tsy voahaja tsara ny zon'olombelona any. Kaominista izy, manohitra ny fahalalahana ara-pinoana sady tena mandà an'Andriamanitra. Tsy mety amiko izany.
…Mahazo tombony be amin'ny asany any Sodàna i Shina nefa tsy miraharaha akory izay mitranga ao Darfur. Tahaka izany ihany koa no ataony any amin'ny toerana hafa.
Mandritra izany, nitoraka bilaogy momba ny diany vao haingana tany Etiopia i Path2Hope izay monina any Tanzania :
Na ahoana na ahoana no fihevitrao momba an'i Etiopia dia ireharehany ny fananany ireo olona bikàna indrindra manerantany, ilay tany manan-karena tantara, mozika sy hairafitrano mampitolagaga (fahagola) izy.
‘Amharinye alchlem’ izay midika hoe ‘ aza miteny/ fantaro Amharic’, no fehezanteny tsara tadidiana. Na tsy maintsy miteny aza aho fa nanahirana ahy ny fivarotana izany, tsotra no navalin-dry zareo fa Etiopiana miaingitra aho mandà ny fototra niaviako. Nisy namana iray nampitandrina ahy fa raha ahiana ho tahaka ny Somaliàna aho dia hahita olana maro. Saingy raha misy firenena iray manaja marina ny vahoaka Sodane dia i Etiopia.
Manana lahatsoratra iray momba ny (FGM) Fanimbàna ny taovam-pananahan'ny Vehivavy i Mimz :
Fantatrareo ve fa misy karazany 3 ny FGM ?
Ratsy noho ny iray hafa hatrany ny iray.
Ity tranonkala ity dia ahitàna ireo fampahafantarana mahasoa momba ny fitantànana ara-pitsaboana FGM, ary azonao jerena ny ambaratongam-pahasimban'ny taovam-pananahan'ny vehivavy aloha sy aorian'ny niterahany .. tahaka izany koa manàna fijery mazava momba ny fiaretana ny fombafomban'ny fametrahana karazana peratra ao amin'ny fivaviana & fanjairana izany.
Nanoratra andianà lahatsoratra mampahafantatra marina ny momba ireo antoko politika samihafa any Sodàna i Precious : fampidirana ara-tantara, ireo antoko politika taorian'ny fanonganam-panjakàna tamin'ny 1989, ny antoko Umma, ny antoko sendikaly demôkratika, ary ny tafiky ny fanafahana ny vahoaka Sodane.
Farany fa tsy ny kely indrindra, miverina avy tamin'ny fiatoany kely i Hipster ka mitoraka bilaogy indray.